လမ်းမှာတင် ဘယ်မှပင့်ဆောင်မရတော့တာကြောင့် ကျောက်မဲတွင်ယာယီကိန်းဝပ်စံပယ်နေတော်မူတဲ့ ပြည်ချစ်ဘုရား ⋆ The Moon
ခုလည်းပဲ ပြင်ဦးလွင်မြို့က ပြည်ချစ်ဘုရားလို အဖြစ်အပျက်မျိုး နောက်ထပ် ဘုရားတစ်ဆူ ပေါ်ထွန်းလာပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်….. နမ့်ခမ်းမြို့မှာ ရောင်းဖို့အတွက်ပင့်ထားတဲ့ မြတ်စွာဘုရားဆင်းတုတော်က မြန်မာပြည်ပြန်မယ်လို့ အိပ်မက်ပေးတော်မူတာကြောင့် ပြန်လည်ပင့်ဆောင်လာရာမှာ ကျောက်မဲမြို့ နောင်ပိန်လမ်းခွဲမှာ ခေတ္တနားခိုရာကနေ ဘယ်လိုမှ အခြားနေရာကို ပင့်ဆောင်လို့မရတော့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
အဲဒီနေရာမှာပဲ ယာယီကိန်းဝပ်စံပါယ်တော်မူတာကြောင့် ဖူးမြော်ကြသူတွေ များပြားလျက်ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
ဒါကြောင့် ဒုတိယမြောက်ပြည်ချစ်ဘုရားလို့ ဖူးမြော်ကြသူတွေက ဆိုနေကြပါတယ်….ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ကျောက်မဲမြို့ နောင်ပိန်လမ်းခွဲမှာ သွားရောက်ဖူးမြော်လို့ရပါတယ်…..
အဲဒီနေရာမှာပဲ ဘုရားတည်မလားဆိုတာကတော့ မသိရသေးပါဘူး… ပရိသတ်ကြီးတို့ ဖူးမြော်နိုင်ဖို့ ဒီပို့စ်လေးကို မျှဝေလိုက်ရတာပါ…….
ခုလညျးပဲ ပွငျဦးလှငျမွို့က ပွညျခဈြဘုရားလို အဖွဈအပကျြမြိုး နောကျထပျ ဘုရားတဈဆူ ပျေါထှနျးလာပွီပဲ ဖွဈပါတယျ….. နမျ့ခမျးမွို့မှာ ရောငျးဖို့အတှကျပငျ့ထားတဲ့ မွတျစှာဘုရားဆငျးတုတျောက မွနျမာပွညျပွနျမယျလို့ အိပျမကျပေးတျောမူတာကွောငျ့ ပွနျလညျပငျ့ဆောငျလာရာမှာ ကြောကျမဲမွို့ နောငျပိနျလမျးခှဲမှာ ခတ်ေတနားခိုရာကနေ ဘယျလိုမှ အခွားနရောကို ပငျ့ဆောငျလို့မရတော့တာပဲ ဖွဈပါတယျ…
အဲဒီနရောမှာပဲ ယာယီကိနျးဝပျစံပါယျတျောမူတာကွောငျ့ ဖူးမွျောကွသူတှေ မြားပွားလကျြရှိတာပဲ ဖွဈပါတယျ…
ဒါကွောငျ့ ဒုတိယမွောကျပွညျခဈြဘုရားလို့ ဖူးမွျောကွသူတှကေ ဆိုနကွေပါတယျ….ပရိသတျကွီးတို့လညျး ကြောကျမဲမွို့ နောငျပိနျလမျးခှဲမှာ သှားရောကျဖူးမွျောလို့ရပါတယျ…..
အဲဒီနရောမှာပဲ ဘုရားတညျမလားဆိုတာကတော့ မသိရသေးပါဘူး… ပရိသတျကွီးတို့ ဖူးမွျောနိုငျဖို့ ဒီပို့ဈလေးကို မြှဝလေိုကျရတာပါ…….
နုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် မှာ ”မှဲ့”ပါတဲ့ သူတွေရဲ့ ထူးခြားချက်များ
ယုန်လေးရဲ့ မျက်နှာတစ်ခုတည်းကိုပဲ ဦးတည်ပြီး ဖျက်စီးသွားခဲ့တဲ့ လူတစ်စုရဲ့ လုပ်ရပ်